Nahoana isika no tsy maintsy mampiseho ny marina momba an’i Turkmenistan · Global Voices teny Malagasy
Sarotra-ilaina indrindra ny mitatitra avy amin'ity fanjakana-didiko-fa-lehibe ity
Voadika ny 09 Oktobra 2019 7:04 GMT
Mpanolotra vaovao ao amin'ny fantsona fahitalavitra Altyn Asyr ao Turkmenistan, mitatitra momba ireo vaovao farany momba ny filoha Gurbanguly Berdymukhamedov. Manana laharana ratsy indrindra manerantany momba ny fahalalahan'ny media i Turkmenistan. Tao amin'ny video YouTube an'i Watan Habarlaty tamin'ny 28 Aogositra 2019.
Iray amin'ireo jadona mpanao famoretana indrindra manerantany ny fireneko.
Tantanin'ny filoham-pirenena feno fitiavantena, fantatra amin'ny fihetsika ampahibemaso hafahafa sy ireo tetikasa tsy misy dikany, manana laharana tena mahamenatra momba ny zon'olombelona i Turkmenistan, firenena main-tany any Azia Afovoany. Mitantana firenena manana harena voajanahary, kanefa mbola ao anatin'ny krizy ara-toekarena lalina izy. Mampahonena ny toe-javatra iainan'ny Tiorkmenina tsotra, mitombo ny tsy fananana asa sy ny tsy fahampian-tsakafo. Satria mitombo ny filaharana ivelan'ny fivarotana, vaky ny ady noho ny mofo.
Tsy mahagaga intsony fa tsy mazoto mampahafantatra ireo zava-tsarotra ireo ny manampahefana. Vao haingana ny firenena no nasongadin'ny Reporters Sans Frontières ho laharana farany tamin'ny Tondro momba ny Fahalalahan-gazety 2019, “nandresy” an'i Korea Avaratra sy Syria. Tsy misy ny haino aman-jery tsy miankina ary voafetra mafy ny fifandraisana eo amin'ny olom-pirenena, ka raha mandeha ny vaovao dia mandeha any an-takonana. Izany no toerana hidirako.
Mpanorina sy tonian-dahatsoratra ao amin'ny Turkmen.News, tranonkalam-baovao any Holandy natomboka tamin'ny taona 2010 tamin'ny anarana hoe Alternative Turkmenistan News aho. Mamoaka vaovao sy famakafakana momba ny tontolo ara-toekarena, ara-tsosialy, ary ara-politika izahay. Nampianatra ahy ny asako fa sady sarotra no zava-dehibe ny asa amin'ny fahazoana vaovao tsy mitanila ao Turkmenistan.
Tamin'ny volana Jolay lasa teo, nandray anjara aho tamin'ny lanonana iray tany Londra nampiantranoan'ny Foibem-Politikan'ny Raharaham-bahiny, vondrona mpihevi-draharaha Britanika iray. Miasa miaraka amin'ny mpampianatra ambony, mpikaroka sy mpanao politika aho namoahanay tatitra iray nokendrena hisarihana ny iraisam-pirenena mikasika ny toe-javatra misy ao amin'ny fireneko. Mitondra ny lohateny hoe: Spotlight on Turkmenistan (Ny Zava-misy ao Turkmenistan), manasongadina ny iray amin'ireo fitondrana jadona indrindra sy mpanao kolikoly indrindra manerantany ny tatitra.
Mpanao kolikoly sady tsy miasa araka ny tokony ho izy ireo andrim-panjakana ao Turkmenistan. Vao haingana aho no nitatitra momba ny fonja Tiorkmenina, izay anjakan'ny aretina, ary namolavola rafitra vaovao hakana vola an-keriny amin'ireo gadra ny mpiambina ny fonja mba hahafahan'ny gadra mahazo filàna fototra. Mampihatra fomba fampijaliana tamin'ny vanimpotoana antenantenany eoropeana, sy fampanjavonana ankaterena ny firenena ary mampiseho fa ohatra iray amin'ny fampanaovana asa an-terivozona mandritra ny fijinjana landihazo fanao isan-taona izy.
Nanasongadina ny fahalovan'ny tontolon'ny fihariana anatiny hatrany amin'ny fotony ny tatitra. Ohatra iray amin'ireo tambajotra mpitady tombombarotra izay natao fotsiny mba hiantohana ny fahamarinan-toeran'ny fitondrana ny fampahafantarana nataoko vao haingana momba ny fifanarahana hanaovana fotodrafitrasa mitetina 2,3 miliara dolara nomena ny zaodahin'ny filoham-pirenena. Nanamarika ireo mpandray fitenenana tany Londra fa nikatso ny fampiasam-bola avy any ivelany tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fandavana tampoka ny fifanarahana sy ny fahazoan-dàlana; mpanjifa marobe tahaka ny orinasan'ny fifandraisa-davitra Rosiana MTS sy ny orinasan'ny fananganana Belarosiana Belgorkhimprom ankehitriny no milahatra hitory ny governemantan'i Turkmenistan .
Tsy maharay vaovao tahaka izany, na avy amin'ny loharanom-baovao eo an-toerana na avy any ivelany ny olom-pirenena tsotra any Turkmenistan. Voaràra ny haino aman-jery vahiny. Tsy mikasika ireo fampahalalam-baovao tandrefana toy ny Reuters, BBC sy ny Deutsche Welle ihany izany, fa tafiditra koa ireo tranonkala amin'ny teny Rosiana (na mpomba an'i Kremlin na mpanohitra azy) anisan'izany ny Meduza, TASS ary Ekho Moskvy. Na dia misy gazety Tiorkmenina maro isan-karazany aza, dia an-kevitra ihany ny tatitra, ary samy midera ny filoha Gurbanguly Berdymukhamedov avokoa.
Nohamafisin'ny fandraràna saika ny media sosialy rehetra ny tsy fahazoana mizara vaovao na tsy fahafahana maneho hatezerana: Voarara avokoa na Instagram, YouTube, Facebook, ary ireo tambajotra sosialy Rosiana Odnoklassniki sy Vkontakte, ankoatra ny hafa. Satria miharatsy ny toe-draharaha any Turkmenistan, dia manamafy ny vahohony amin'izay feo mahaleotena rehetra ny fanjakana.
Saingy na dia ao anatin'ny haizina toy izany aza, dia misy ny tselatselatra fanantenana. Natsangana tsy ho tratran'ny halavan-tanan'ny fitondrana ireo tetikasa natokana hitaterana ny fijalian'ny vahoaka Tiorkmenina isan'andro, toy ny Chronicles of Turkmenistan ao Viena. Ny tranonkala toa itony no hany endrika fampahalalana azo antoka momba ny firenena. Miasa miaraka amin'ny tambajotran'ny Tiorkmenina be herim-po izay mamoaka vaovao an-tsokosoko ivelan'ny firenena amin'ny alàlan'ny rafitra fandefasan-kafatra amin'ny soramiafina ny tranonkalako Turkmen.News. Tena maninan-doza ho an'ny tenan'izy ireo sy ny fianakavian'izy ireo izany. Efa maro ireo mpanao gazety voasambotra tany Turkmenistan na noterena hitsoaka ny firenena tahaka ahy.
Iray amin'ireo mpitati-baovaontsika i Gaspar Matalaev, izay manaramaso ny fampiasana ny asa an-terivozona mandritra ny fijinjana landihazo. Tamin'ny taona 2016, nosamborina izy noho ny fiampangana fitaka ho manao hosoka sy kolikoly ary nigadra telo taona an-tranomaizina. Navotsotra ihany izy tamin'ny 6 septambra 2019 rehefa nahavita ny saziny an-tranomaizina. Mpanao gazety iray hafa, Saparmamed Nepeskuliev kosa voasazy higadra telo taona an-tranomaizina tamin'ny taona 2015 noho izy voalaza fa nihazona zavatra tsy ara-dalàna. Samy nahazo fanohanana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona sy vondron'asan'ny Firenena Mikambana i Matalaev sy Nepeskuliev. Taorian'ny famotsorana azy tamin'ny volana Mey 2018, nandao tanteraka an'i Turkmenistan i Nepeskuliev tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity.
Mpanao gazety Tiorkmenina Gaspar Matalaev (ankavia) sy Saparmamed Nepeskuliev (ankavanana), samy navotsotra tamin'ity taona ity rehefa avy nigadra nandritra ny fotoana lavabe. Sary avy amin'ny Turkmen.News. Nahazoana alalana.
Saingy mbola mihiboka any am-ponja ny hafa, zara raha mahazo vaovao momba ny fahasalamana na ny misy ny havany ny fianakavian'ireo gadra. Nanaramaso fanjavonana miisa 121 teo anivon'ny rafitry ny fonja ao Turkmenistan ny hetsika Prove They Are Alive, na dia azo antoka aza fa mbola ambony noho izany no tena isa marina. Nogadraina nandritra ny 10 taona mahery ny gadra politika iray, Gulgeldi Annaniyazov, zara raha nahazo vaovao mikasika ny tena momba azy ny fianakaviany tamin'izany fotoana izany.
Manohintohina ny asako amin'ny maha-tonian-dahatsoratra ahy ny hamafin'ny loza aterak'izany. Satria mampiasa teknika fanarahamaso avo lenta ny fanjakana Turkmenistan mba hanaraha-maso ny mponina ao aminy, mampidi-doza ny mamoaka votoaty izay mety ho voatsongo dia amin'ny fotoana na toerana voafaritra manokana ary mety hamantarana ny loharanom-baovao. Mandray ny andraikitray am-pahamatorana amin'ny asa fanoratan-gazety izahay na dia mametra ny fahafahanay hitatitra vaovao “malaza” ara-potoana aza izany.
Na dia toa tsy taitra momba ny lazany iraisam-pirenena aza ny fitondrana Tiorkmenina, dia miankina amin'ny fiarahamiasa sy ny varotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy any ivelany ny fitonian'ity firenena voahidy ity. Ary raha mitodika ao amin'ny firenena ny sain'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena, dia hanjavona ny fahatokisan'ireo mpiara-miombon'antoka na ireo mety ho mpamatsy vola ireo. Ny fifantohana bebe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina mpihary iraisampirenena amin'ny fombam-pihariana manaja etika sy lovainjafy no midika fa tena zava-dehibe tsy misy toy izany ny famoahan-taratasy sy boky toy ny tatitra avoakanay.
Manome antoka ireo mpitati-baovao izay maninan-doza ny fahafahany isaky ny mandefa sombim-baovao fa tsy misy vondron'orinasa na fanjakana miara-miasa amin'i Turkmenistan ka milaza fa tsy mahalala ny toetran'ny fitondrana ao Ashgabat.
Ny lanonan'ny Foreign Policy Centre (Foiben'ny Politikan-dRaharaham-bahiny) no sehatra tonga lafatra ho an'ny olona mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpanao politika hitakiana ny fanombanana indray ny politikan'ny governemanta Britanika manoloana an'i Turkmenistan. Satria manamafy ny fifatorana ny fitondrana, dia mangataka izahay mba hanitarina izany politika izany lavidavitra kokoa any amin'ny varotra sy ny sampan'ny indostria manerana ny vondrona Eoropeana sy ny fianakaviambe iraisampirenena, ary ireo rehetra mikasa hiara-hiasa amin'ny governemanta izay manenjika ny olom-pireneny sy mamitaka ireo mpamatsy vola azy.
Satria manery an'i Turkmenistan izahay mba hikolokolo ny endriny, dia hanery azy ireo hanova ny fitondrantenan'izy ireo izahay. Ity fitomboan'ny fifantohana ity no manome antsika sehatra iray hitakiana ny kalitaon'ny fiainana mendrika ho azon'ny Tiorkmenina rehetra.